Ogaden News Agency (ONA) – Xubnaha Golaha Dhexe ee UK oo kulan-hawleed isugu yimid
Xubnaha Golaha Dhexe ee UK oo kulan-hawleed isugu yimid
Posted by ONA Admin	/ August 31, 2014
Maalintii sabtida ahayd ee taariikhdu ku beegnayd 30/082014, waxaa magaalada London ee carriga UK shirk u yeeshay xubnaha Golaha Dhexe ee ka hawlgala waddanka UK oo uu weheliyo la-taliyaha Guddoomiyaha JWXO.
Shirkan, oo uu shir-guddoominayay guddoomiyaha JWXO Admiral Maxamed Cumar Cismaan, waxaa lagaga dooday arrimo badan oo khuseeya halganka Ogaadeenya, waxaana lagu falanqeeyay xaaladaha siyaasadeed iyo amni ee ka jira gobolka Geeska Afrika iyo raadaynta ay ku yeelan karaan halganka Ogaadeenya.
Shirku wuxuu warbixin ka dhagaystay guddoomiyaha JWXO oo ka warbixiyay qaabka ay u socdaan hawlgallada ay CWXO ka wadaan gudaha dalka Ogaadeenya, isagoo tilmaamay in CWXO ay si hab-sami ah u wataan hawlgalladoodii caadiga ahaa, isla markaana ay si wayn u naafeeyeen oo hadhka u diideen ciidammada nacabka ah ee gumaysatada Itoobiya ee ku sugan dalka Ogaadeenya. Guddoomiyuhu wuxuu tilmaamay in guulo lagu naalloon karo ay CWXO ka soo hoyiyeen gumasatada Itoobiya iyo wax ma-garatada ay ku adeegato.
Guddoomiyuhu wuxuu sidoo kale ka warbixiyay marxaladda uu halganka Ogaadeenya maanta marayo iyo duruufaha ku meermeersan, isagoo sheegay in hawlaha halganku ay u socdaan si lagu niyad samaan karo, laakiin mar kastaba loo baahan yahay in dadaalka la sii labanlaabo, si guusha loo soo dedejiyo.
Warbixinahaas ka dib, wuxuu shirku si aad u qodo-dheer u lafa-guray ajandihii la soo hordhigay, ooka koobnaa qodobo muhiim ah oo loo arkayay inay ku habboon yihiin in laga wadatashado, ka dibna laga gaadho go’aamo ku habboon.
Waxaa si wayn looga dooday arima la xihiidha halganka ka socda gudaha iyo sidii loo sii horumarin lahaa, isla markaana loo waafajin lahaa duruufaha Gobolka ka jira. Waxaa la’isla gartay inay lagama maarmaan tahay in la sii xoojiyo qorshayaashii horey u dajisnaa iyo in la sii wado barnaamijyadii kor loogu qaadayay halgan gudaha tiro iyo tayo labadaba.
Waxaa sidoo kale si aada loo lafa-guray xadgudbyada uu gumaysigu ku hayo shacabka Ogaadeenya iyo tallaabooyinka ku habboon looga qaadi lahaa, isla markaana beesha caalamka loogu bandhigi lahaa dhibaatooyinka bani’aadamnimada ka baxsan ee gumaysigu ku hayo shacabka aan waxba galabsanin ee Ogaadeenya. Waxaa la isla qaatay in la sii dardar-galiyo qorshayaashii la dejiyay ee ku saabsanaa in denbiyada uu gumaysigu ka galayo dadwaynaha Ogaadeanya loo gudbiyo hay’adaha cadaalada ee caalamka iyo Maxkamadda Denbiyada ee adduunka.
Waxaa sidoo kale laga dooday sidii loo sii horumarin lahaa Jaaliyadaha Ogaadeenya ee adduunka ka hawlgala, wax-qabadkoodana loo kordhin lahaa. Shirku wuxuu Jaaliayadaha si wayn ugu ammaanay sidii qiimaha lahaydee ay u qabteen xusaskii lagu maamuusayay sannad guuradii soddonaad ee ka soo wareegtay asaaskii JWXO, wuxuuna tilmaamay in arrintaasi ay ka turjumayso sida ay dadwaynaha Ogaadeenya ugu wada-qanacsan yihiin halganka ay JWXO hormuudka ka tahay. Shirku wuxuu Jaaliyadaha ugu baaqay inay dadaalkooda sii kordhiyaan, si ayna marna uga hoos uga dhicin kaalinta hormuudka ah ee kaga jiraan halganka Ogaadeenya.
Shirku wuxuu kaloo ka dooday meesha ay marayso qabanqaabada shirwaynaha Jaaliyadaha Ogaadeenya, oo dhawaan lagu qaban doono magaalada London. Shirku wuxuu warbixin arrintaas ku saabsan ka dhagaystay guddiga qabanqaabada shirwaynaha, isagoo si aad uga mabsuuday sida ay hawsha u wadaan, isla markaana siiyay talooyin iyo tusaalayaal hawlaha lagu sii xoojinayo.
Shirku wuxuu kaloo si aad ah u lafa-guray qalalaasaha siyaasadeed ee Soomaaliya ka jira iyo saamaynta uu ku yeelan karo halganka Ogaadeenya. Shirku wuxuu falanqeeyay doorka uu gumaysigu ku leeyahay dhibaatada siyaasadeed ee Soomaaliya ka jirta iyo sida uu u kala qay-qaybinayo dadwaynaha Soomaaliyeed, si isaga horkeeno oo u sii kala fogeeyo. Shirku wuxuu isla gartay in danta ugu muhiimsan ee gumaysigu ka leeyahay fara-galinta Soomaaliya ay tahay inuu ku naafeeyo halganka Ogaadeenya, iyo inuu Soomaaliya ka abuuro canaasiir u shaqeeya oo uu halganka kula dagaallamo.
Shirku wuxuu ku taliyay in isha lagu hayo dhaqdhaqaaqyada uu gumaysigu ka wado dalka Soomaaliya, gaar ahaan gobollada xuduuda la leh Ogaadeenya, isla markaana tallaabada ku habboon laga qaado wax kastoo carqalad ku noqon kara geeddi socoda halganka Ogaadeenya.
Shirku wuxuu dhaleeceeyay hadalkii daandaansiga ahaa ee dhawaan ka soo yeeshay guddoomiyaha maamulka Puntland C/wali Gaas, oo sheegay in nabadgelyada gobolka ay Shabaab iyo ONLF khatar ku yihiin. Shirku wuxuu nasiib darro ku tilmaamay in nin isku sheegaya inuu madax ka yahay muumul Soomaaliyeed uu hadal noocaas ah ku hadlo, isla markaana ONLF ka dhigo inay daraf ka tahay wax aka dhacaya gudaha Soomaaliya, wuxuuna shirku ka digay in cidhib xumada ka timaada siyaasada uu ninkaasi ka dhawaajiyay ay tahay mid uu masuuliyadeeda isagu kaligii xanbaari doono.